Ithiphu yezobuchwepheshe - UMika Pipeline Technology Co, Ltd.
Amandla kazibuthe wezinto eziwumbala
Iningi lama-clamp lenziwa ngamamaki ahlukene wensimbi engenasici. Imvamisa, amakhasimende azosebenzisa odonsa ukuthola ikhwalithi yokuqukethwe. Uma kukhona amandla kazibuthe, okuqukethwe akulungile. Eqinisweni, okuphambene nalokho kuyiqiniso. I-Magnetism isho ukuthi izinto ezingavuthiwe zinobunzima obukhulu namandla aphezulu. . Ngoba izigxobo ezenziwa njengamanje zivame ukwenziwa ngensimbi engenasici enjengo-201, 301, 304, no-316, ngemuva kokulashwa okushisa, izinto ezingavuthiwe zingangabi ngokuphelele uzibuthe, kepha izinto ezingavuthiwe ezisetshenziselwa ukukhiqiza ama-clamp kumele zihlangane nobulukhuni namandla ashubile womkhiqizo uqobo. , Ngakho-ke ubulukhuni namandla ashubile kungahlangana kuphela nenqubo ebandayo yokugoqeka, edinga ukuthi into ethambile ibunjwe ukuze ibe umugqa omncane obandayo obandayo. Ngemuva kokugobhoza kwamakhaza, empeleni ziba nzima futhi zikhiqize namandla kazibuthe.
Indima yokugcotshwa kwezikulufa
Njengamanje, ungqimba olugxiviwe phezulu kwensimbi ekhanyayo yensimbi enendima lubamba iqhaza lokuthambisa. Iningi lezikulufo zensimbi ezikwi-DIN3017 clamp nazo zenziwe umdlandla, ezingadlala indima yokugcoba. Uma ungadingi i-zinc plating, udinga i-wax compound njenge-lubricant. Nganoma yisiphi isikhathi, i-wax compound izokoma, izinga lokushisa ngesikhathi sokuhamba noma imvelo enobunzima lizodala ukulahleka, ngakho-ke ukuthambisa kuzoncipha, ngakho-ke kunconywa ukuthi isikali sensimbi siphinde sigqunywe.
I-T-bolt clamp enentwasahlobo
I-T-bolt clamp enentwasahlobo ijwayele ukusetshenziswa kumaloli asindayo weloli kanye nezinhlelo zomoya. Inhloso yentwasahlobo ukulamula ukunwetshwa kanye nokuqhekeka koxhumano lwe-hose. Ngakho-ke, lapho ufaka lesi sehla, kufanele unake ukuphela kwentwasahlobo akukwazi ukuthi kube phansi ngokuphelele. Uma kunezinkinga ezimbili impela ekugcineni: enye ukuthi intwasahlobo ilahlekelwa umsebenzi wayo wokulamula ukunwebeka kokushisa nokwenziwa kwezakhi futhi iba yisikhala esiqinile; yize lokhu kungancipha ngandlela thize, ayikho indlela yokuzivumelanisa nokwanda okwenziwe ngokomzimba nokwenziwa kwezakhi zomzimba. Okwesibili ukushisa kohlelo lokuqinisa, i-hose izoba nengcindezi yokuqinisa ngokweqile, ilimaze ukufakwa kwamapayipi, futhi kunciphise kakhulu impilo yenkonzo yohlelo lokuqinisa.